Imibuzo evame ukubuzwa - i-AnHui Gaoge Intelligent Equipment Co., Ltd.
Siphi isikhathi sokulethwa noma sokuhola?
Kuya nge-oda lakho, entanjeni yonke yokukhiqiza efana nesikhwama uma kwenzeka ukupakisha, isikhwama ekupakisheni isikhwama, imvamisa kuyizinsuku ezingama-45-60. Imishini eyodwa njengemishini yokupakisha ye-VFFS, imishini yokupakisha esikhwameni esenziwe ngaphambilini, imishini yokuvula umlomo ovulekile, imvamisa kuyizinsuku ezingama-30-45. Ngenkathi ephakeme, futhi inokuthile okuphathelene nohlelo lwethu lokukhiqiza.
Ingabe kukhona ubuncane bokufaka i-oda?
Yebo, udinga kuphela ukuthenga isethi eyodwa yanoma yimiphi imishini njengobuningi be-oda elincane. Njengeqoqo elilodwa lomshini wokupakisha we-VFFS, iqoqo eli-1 lomshini wokupakisha owenziwe ngaphambilini, isethi eyodwa yomshini wokuvula umlomo ovulekile.
Kuthiwani ngendlela yokukhokha?
Samukela i-TT, i-50% TT njengokukhokha okuphansi ne-50% TT njengokukhokha ibhalansi ngaphambi kokuthunyelwa.
Yini imodi yokulethwa?
Imishini ingathunyelwa noma ngolwandle noma ngendiza, singanikeza i-FOB, i-CNF, i-CIF term ngokuya ngemfuneko yamakhasimende. Ngosayizi omkhulu womshini onjengomshini wokuvula umlomo ovulekile, singathanda ukusikisela ukuthunyelwa ngolwandle.
Kuthiwani ngokupakisha kwempahla?
Sisebenzisa okujwayelekile ukuthekelisa ukupakisha izinto. EYurophu nase-Australia, sisebenzisa ikesi elenziwe ngomlilo. ENyakatho Melika, eNingizimu Melika nase-Afrika, sisebenzisa ikesi lamapulangwe amathathu noma ikesi elifuthwe ngokhuni. E-Asia, sisebenzisa ikesi lamapulangwe noma ikesi lamapulangwe amathathu.
Yini imfuneko yokuphakelwa kukagesi?
Ngokuvamile, kungenziwa egcizelele ngokuvumelana nezidingo zamakhasimende kungaba 220v 1phase noma 110v 1phase noma 380v 3phase noma 220v 3phase, njll
Ngubani ozofaka imishini?
Okokusebenza okukodwa okufana nomshini wokupakisha we-VFFS, umshini wokufaka isikhwama owenziwe ngaphambilini, umshini wokuvula umlomo ovulekile, imvamisa sizohlinzeka ngencwadi namavidiyo ukusiza ikhasimende ukuthi lifake imishini Ngomugqa ophelele wokupakisha ofana nesikhwama uma kungenzeka upakishe, isikhwama ekupakisheni isikhwama, sizothumela uchwepheshe ukuthi asize efektri yekhasimende, umthengi udinga kuphela ukukhokhela ithikithi lomoya lokuya nokubuya, ukudla, izindleko zokulala nesibonelelo sansuku zonke.
Sizohlinzeka ngokusekelwa kwesondlo kwanoma yiluphi udaba ngemishini. Uma okokusebenza kusengaphansi kwewaranti, sizomiselela futhi silungise izingxenye ezinamaphutha mahhala futhi umthengi uzodinga kuphela ukukhokhela izindleko zokuthumela noma zomoya. Ngokuvamile, siyakwazi ukuthumela ingxenye engalungile esesitokisini kungakapheli usuku olungu-1.
Imibuzo evame ukubanjwa yomshini wokuvula imilomo --- Yimiphi imikhiqizo engayipakisha?
Lo mshini usetshenziselwa ukupakisha imbewu, okuphakelayo, ama-cubes, udoti wekati, usimende, amakhemikhali, amalahle, umanyolo, i-flake, ukudla kwe-PET, ilayisi, isihlabathi, ama-pellets njll.
Imibuzo evame ukubizwa ngomshini wokufaka isikhwama semilomo --- Isikhathi sokulethwa noma sokuhola siphi?
Isikhathi sokuhola izinsuku ezingama-60.
Imibuzo evame ukubizwa ngokuthi i-Bagging Machine FAQs --- Uhlobo luni lwesikhwama sesikhwama somshini wokufaka isikhwama owenziwe ngaphambilini?
ama-gussets, isikhwama esijwayelekile somcamelo noma ibhulokhi / ibhulokhi elingaphansi, ngesibambo noma ngaphandle kwesibambo.Isikhwama se-PE, isikhwama eselukiwe, esikhwameni se-PP
Imibuzo evame ukubizwa ngomshini wokugoqa imilomo --- Iyini ivolumu yokupakisha?
Imibuzo evame ukubizwa ngomshini wokugoqa imilomo --- Siyini isivinini sokupakisha?
Ngokuya ngemikhiqizo ehlukile, isivinini sokupakisha kungaba izikhwama eziyi-8-12 / iminithi.
Imibuzo evame ukubuzwa ngomshini wokuvula izikhwama --- Ingabe kukhona ubuncane bokufaka i-oda?
Yebo, udinga kuphela ukuthenga isethi eyodwa yanoma yimiphi imishini njengobuningi be-oda elincane.
Imibuzo evame ukubuzwa ngomshini wokuvula izikhwama --- Yini uhlobo lwento kagesi?
Iningi lezinto zamukela uhlobo lomhlaba jikelele, njenge-Siemens Touch screen & PLC njll, iPanasonic servo motor, ne-Omron, Schneider njll.
Imibuzo evame ukubanjwa yomshini wokuvula imilomo --- Iyini imfuneko yokunikezwa kwamandla?
Imibuzo evame ukubanjwa yomshini wokuvula umlomo ngomlomo --- Kuthiwani ngokupakisha kwempahla?
Imibuzo evame ukubanjwa yomshini wokuvula umlomo ngobani --- Ngubani ozofaka imishini?
Ngomugqa ophelele wokupakisha ofana nesikhwama uma kungenzeka upake, isikhwama ekupakisheni isikhwama, sizothumela uchwepheshe ukuthi asize efektri yekhasimende, umthengi udinga kuphela ukukhokhela ithikithi lomoya lokuya nokubuya, ukudla, izindleko zekamelo nesibonelelo sansuku zonke.
Imibuzo evame ukubanjwa yomshini wokuvula umlomo ngomlomo --- Kuthiwani ngesevisi yokuthengisa ngemuva?
Sizonikeza ukwesekwa kwesondlo kwanoma yiluphi udaba ngemishini, isikhathi sewaranti yizinyanga ezingama-24. Uma okokusebenza kusengaphansi kwewaranti, sizomiselela futhi silungise izingxenye ezinamaphutha mahhala futhi umthengi uzodinga kuphela ukukhokhela izindleko zokuthumela noma zomoya. Ngokuvamile, siyakwazi ukuthumela ingxenye engalungile esesitokisini kungakapheli usuku olungu-1.
Ifomu Elimile Gcwalisa Seal Packaging Machine FAQs --- Kuyini ukusetshenziswa kwalo mshini?
Ingafakelwa amadivayisi ahlukahlukene okugcwalisa uketshezi oluhlukile, i-powder, imikhiqizo ye-granule, efana ne-Multi heads weigher, i-Auger filler, i-liquid paste filler, umshini wokulinganisa inkomishi yokugcwalisa neminye imishini ekhethekile yokugcwalisa imikhiqizo.
Ifomu Elimile Gcwalisa Seal Packaging Machine FAQs --- Siphi isikhathi sokulethwa noma sokuhola?
Kuya nge-oda lakho, imvamisa kuyizinsuku ezingama-30 zomshini ojwayelekile.
Ifomu Elimile Gcwalisa Seal Packaging Machine FAQs --- Uhlobo luni lwesikhwama somshini wokupakisha we-VFFS?
Isikhwama somcamelo, isikhwama se-gusset, isikhwama se-stabilo, isikhwama se-quad seal.
Ifomu Elimile Gcwalisa Imishini Yesikhwama Sokupakisha Seal FAQs-- Ingabe kukhona ubuncane obuncane bokufaka i-oda?
Ubuncane be-oda ubuningi busethwe ngo-1
Ifomu Elimile Gcwalisa Seal Packaging Machine FAQs --- Uyini usayizi wesikhwama umshini ongawupakisha?
Singahlinzeka ngemishini ehlukile ye-VFFS ngosayizi ohlukile wesikhwama, kufaka phakathi i-GVF-420, GF-520, GVF-720, GVF-1100.
Ifomu Elimile Gcwalisa Umshini Wokupakisha Seal Imibuzo Evame Ukubuzwa --- Yini uhlobo lwento kagesi?
Ifomu Elimile Gcwalisa Seal Packaging Machine FAQs --- Iyiphi indlela yokulethwa?
Imishini ingathunyelwa noma ngolwandle noma ngendiza, singanikeza i-FOB, i-CNF, i-CIF term ngokuya ngemfuneko yamakhasimende. Ngosayizi omkhulu womshini onjenge-umshini wokuvula umlomo ovulekile, singancamela ukuthumela ngemikhumbi olwandle.
Ama-FAQ Womshini Wokupakisha Wangaphambi Kokwenziwa --- Kuyini ukusetshenziswa kwalo mshini?
Ama-FAQ Womshini Wokupakisha Wangaphambi Kwenziwe --- Isikhathi sokulethwa noma sokuhola siphi?
Ama-FAQ Womshini Wokupakisha Wangaphambi Kwenziwe --- Uyini usayizi wesikhwama esincane umshini ongakwazi ukuwupakisha?
Ububanzi besikhwama kufanele bube ngaphezu kuka-80mm.
Ama-FAQs Wenziwe Ngesikhwama Wangaphambi Kwenziwe --- Uhlobo luni lwesikhwama sesikhwama somshini wokufaka isikhwama owenziwe ngaphambilini?
Kwenziwe ngaphambili Uziphu sikhwama, Spout Doypack, Stand-up sikhwama, Isivakashi esikhwameni, 4 ohlangothini uphawu
Ama-FAQ Womshini Wokupakisha Wangaphambi Kwenziwe --- Luyini uhlobo lwento kagesi?